जामले लियो ज्यान- समाचार - कान्तिपुर समाचार
जामले लियो ज्यान
भरतपुरबाट सामान्य अवस्थामा ४ घण्टामा काठमाडौं पुगिन्छ तर नचनीलाई लिएर साढे पाँच बजेतिर हिँडेको एम्बुलेन्स साढे नौ बजे बल्लतल्ल नागढुंगादेखि केही तल टायल घर पुग्यो । त्यहीं उनको प्राण गयो ।
आश्विन १९, २०७५ रमेशकुमार पौडेल
चितवन — सिकिस्त बिरामी नचनी चौधरीलाई उनका दुई छोराले राम्रो उपचारका लागि भरतपुरदेखि एम्बुलेन्समा राखेर बुधबार बिहान काठमाडौं दौडाए । तर नौबिसे–नागढुंगाको लामो जाम छिचोल्न नसक्दा उनी अस्पताल पुग्नै पाइनन् । बाटैमा उनको प्राण गयो ।
एम्बुलेन्समै ज्यान गुमाएकी नचनी चौधरी
काठमाडौं पुर्‍याए स्वास्थ्य सुधार हुने आशा लिएका छोराहरू देवघाटमा आमाको सतगत गरेर घर फर्किए । रत्ननगर–६, बछौलीकी ५१ वर्षीया नचनीलाई ज्वरो आउनेलगायत समस्या देखिन थालेपछि छोराहरूले सदरमुकामको भरतपुर सामुदायिक अस्पताल लगेका थिए । अस्पतालमा भर्ना गरेर उपचार हुँदै थियो तर सुधार भइरहेको थिएन । १४ गतेपछि आमाको अवस्था बिग्रँदै गएको माइला छोरा राजेश चौधरीले बताए । डाक्टरले काठमाडाैं लैजान भनेपछि जेठा दाइ भुवनेश्वर र उनी आमालाई लिएर बाटो लागे ।
भरतपुरबाट एम्बुलेन्स साढे पाँच बजेतिर हिँडेको थियो । सामान्य अवस्थामा पौने चार वा चार घण्टामा एम्बुलेन्स काठमाडौं पुग्छ तर उनीहरू चढेको बा६ख ५२५५ नम्बरको एम्बुलेन्स सरर जान पाएन । जाम परेका कारण रोकिँदै गुडदै गर्दा काठमाडौं पुग्ने समय (साढे नौ बजे) मा उनीहरू नागढुंगादेखि केही तल टायल घर पुगे । त्यो बेला नचनीको मुखबाट फिँज निस्केको थियो ।
एम्बुलेन्स चालक नवराज थापाले नचनीको प्राण नरहेको अडकल काटे । त्यसैले काठमाडौं लैजानु बेकार जस्तै थियो । फर्केर गजुरीको मेडिकलमा परीक्षण गर्दा मृत्यु भएको पक्का भयो । भरतपुर सामुदायिकमा नचनीलाई डा. विशाल श्रेष्ठले हेरेका थिए । डा. श्रेष्ठका अनुसार मिर्गौलाभन्दा माथि एक प्रकारको हर्मोन निस्कने ग्रन्थि हुन्छ, नचनीको त्यो ग्रन्थीमा ट्युमर पलाएको थियो ।
‘बिरामीको रक्तचाप अचानक बढ्ने समस्या थियो । यहाँ राखेर सुधार हुने नदेखेपछि राम्रो उपचारका लागि काठमाडौं पठाएका हौं,’ उनले भने । उनका अनुसार नचनीको रक्तचाप झयाप्पझयाप्प बढ्ने गरेको थियो । एम्बुलेन्स जाममा फस्दा रक्तचापमा समस्या आएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ । एम्बुलेन्स चालक नवराज थापाले जाममा नपरेको भए बिरामीलाई अस्पताल पुर्‍याउन सकिने बताए । ‘जहाँसम्म हामी पुगेका थियौं, त्यहाँबाट ४० मिनेटमा महाराजगन्ज शिक्षण अस्पताल पुग्न सकिन्थ्यो तर बाटामा लगभग दुई घण्टा जाममा परियो,’ थापाले टेलिफोन कुराकानीमा भने ।
भरतपुरबाट मलेखु पुग्दासम्म बाटो सामान्य थियो । मलेखुबाट गाडीको ताँती देखिन थालेको थियो । एम्बुलेन्स स्वाभाविक गतिमा गुड्न पाएको थिएन । सिम्ले पुगेपछि जाम सुरु भएको छोरा राजेशले बताए । जुँगेखोला पुगेपछि एम्बुलेन्स रोकेर बस्नुपरेको थियो । ‘सुरुमा पौने घण्टाजति रोकियौं, दुई–तीन किलोमिटर हिँडेपछि फेरि रोकिनुपयो,’ राजेशले भने । प्रहरीलाई खबर गरे पनि गाडी अस्तव्यस्त भएका कारण केही उपाय निकाल्न नसकेको उनले बताए ।
शिक्षण अस्पतालमा आईसीयू व्यवस्था भइसकेको थियो । भरतपुरमा आईसीयूमै राखेकाले काठमाडौंमा पनि त्यसै गर्नुपर्ने भएपछि बुझेर पहिल्यै बुक गरेको भुवनेश्वरले बताए । ‘डेढ लाख भरतपुरमै खर्च भएको थियो । काठमाडौं लैजानुपर्ने भएपछि छरछिमेक र आफन्तसँग सरसापट गरेर दुई लाखजति लिएर हिँडेका थियौं । आईसीयू तयार थियो तर आमालाई अस्पताल पुर्‍याउनु परको कुरा, काठमाडौं छिराउन पनि सकिएन,’ भुवनेश्वरले दु:ख पोखे ।
प्रकाशित : आश्विन १९, २०७५ ०७:४३
तत्कालीन किष्ट बैंकका प्रमुख ज्ञवाली पक्राउ
आश्विन १९, २०७५ जनकराज सापकाेटा
काठमाडौँ — तीन वर्षदेखि फरार रहेका तत्कालीन किष्ट बैंकका प्रमुख कमल ज्ञवालीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । ज्ञवालीलाई उच्च अदालत पाटनले २०७३ जेठमा बैंकिङ कसुर तथा किर्ते जालसाजी मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो ।
अदालतले उनीविरुद्ध १५ करोड जरिवाना र ४ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । त्यस लगतै ज्ञवाली फरार रहेका थिए । उच्च प्रहरी स्रोतकाअनुसार महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले सिमावर्ती भारतीय क्षेत्रबाट पक्राउ गरेर काठमाडौं ल्याइसकेको छ ।
ज्ञवाली पक्राउ गरेको बारे महाशाखाले कुनै सूचना सार्वजनिक गरेको छैन । महाशाखा प्रमुख एसएसपी धिरजप्रताप सिंहले पक्राउ गर्ने प्रयास भइराखेकै बताए ।
ज्ञवाली पक्राउ बारे प्रहरीले आजै पत्रकार सम्मलेन गरी जानकारी दिने तयारी गरेको प्रहरी उच्च स्रोतको दाबी छ ।
प्रकाशित : आश्विन १९, २०७५ ०७:३८